Asia kunye nePacific - ALinks
Amanqaku eAsia nakwiPasifiki
Ungawufumana njani umsebenzi eDubai wamaIndiya?
January 17, 2022 UAntika Kumari dubai, imisebenzi
Ngaba ujonge umsebenzi eDubai? Ngokwengxelo ka-LinkedIn "UMbindi Mpuma kunye noMntla Afrika wokuThutha iiNdlela eziKhokelela ku-2017", ukuqeshwa okutsha kuya kuba yinto ephambili kwishishini laseDubai ngo-2017.
Luxabisa malini uhambo oluya e-UAE?
January 16, 2022 UKaruna Chandna imali, hamba, UAE
I-AED 1,014 ($ 276) yi-avareji yexabiso lemihla ngemihla lokuhamba kwi-United Arab Emirates. Ixabiso eliqhelekileyo lokutya kwi-United Arab Emirates ngosuku olunye yi-AED 150 ($ 41). Ixabiso eliphakathi kwihotele
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eOstreliya? Iimbacu eOstreliya
January 16, 2022 IShubham Sharma Ostreliya, ababaleki
E-Australia, ukufuna indawo yokhuseleko kufuna imeko yeembacu. Kananjalo kuya kufuneka ufake isicelo se-visa yokhuseleko yesicelo sokukhuselwa. Abafuna i-Asylum kufuneka babenendawo yokubaleka ukuze bafake izicelo ze-Asylum e-Australia. Abantu abafuna indawo yokhuseleko banokufaka isicelo sokukhuselwa
IiVisa kumazwe asimahla ePakistan
January 16, 2022 IShubham Sharma Phakistan, ivisa
IPakistan ibekwe kwindawo ye-107th kwi-Index yePasipoti yaseHenley ngokwenkululeko yokuya kwezinye izizwe. Ngaphandle kwento yokuba le nto iyibeka ekukhanyeni okungalunganga, likho ithemba. Ngepasipoti yasePakistan, unako
Iibhanki kwi-UAE, United Arab Emirates
January 16, 2022 IShubham Sharma iibhanki, UAE
I-United Arab Emirates yaziwa umhlaba wonke kwizinto ezininzi. Idume kwihlabathi liphela ngezixeko zayo zangoku ezinje ngeDubai kunye ne-Abu Dhabi kwaye ikwaziwa ngeoyile ekrwada. I-UAE lilizwe elinenye yezona zinto zibalaseleyo
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eThailand? Iibhanki eThailand
January 16, 2022 UKaruna Chandna iibhanki, Thayilendi
Ukuba ufudukela eThailand okanye undwendwela iThailand ixesha elide, uya kukhawuleza uqonde ukuba ukufikelela kwimali yakho kunokubiza kakhulu kwimirhumo. Ke, kuya kufuneka uvule iakhawunti yebhanki
Ufumana njani umsebenzi eKorea njengowasemzini?
January 16, 2022 UMaitri Jha imisebenzi, emaznstie ekorea
Ukuba sele unayo imvume yokusebenza, okanye ungumKorea, ungaya ezantsi ukuze ubone indlela yokufumana umsebenzi eKorea. Ukuba awunayo imvume yokusebenza, into yokuqala ekufuneka uyenzile yile
Iifowuni ezi-5 ezidumileyo ezikhoyo eUzbekistan
January 16, 2022 demi izinto ukuthenga, Uzbhekistan
Ndikhangele iifowuni ezintlanu ezinokuthengwa zisiwe e-Uzbekistan. Amaxabiso abo aphakathi kwezona zibalaseleyo onokuzifumana kwi-Intanethi zeUzbekistan. Ufuna nje umonde wokuhambisa iiveki ezimbini
Zinjani izindlu eTshayina? Ukuthenga kunye nokurenta eTshayina
January 16, 2022 UAntika Kumari iTshayina, izindlu
Ukuze ufumane indawo yokuhlala e-China, kuthatha isantya, unyamezelo kwaye, ngesiqhelo umhlobo olungileyo okanye umthengisi othengisa ulwimi lwasekhaya. Siza kukuhamba ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlala, ezinokwenzeka
Iimfuno ze-visa zase-Afghanistan-Uyifumana njani i-visa ye-Afghanistan?
January 16, 2022 IShubham Sharma Afghanistani , ivisa
I-Afghanistan iphakathi kokukhawuleza ukufumana i-visa. Uninzi loonozakuzaku bakhupha ivisa yabakhenkethi kunye nefom yesicelo egqityiweyo, ifoto yohlobo lokundwendwela, umrhumo wevisa, kunye nokuprintwa kwepaspoti yakho. Benza kakhulu ngosuku olunye.
1 2 3 ... 27 I zithuba ezilandelayo»